अध्याय ५ - सुसमाचार फैलिन थाल्छ
के यहूदीहरूले सामरीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने गर्दथे (यूहन्ना ४:९)?________________। यहूदीहरूले यी मानिसहरूलाई घृणा गर्दथे। "सामरी" भन्ने नाउँले बोलाइनु ठूलो अपमान गनिन्थ्यो। परमेश्वरका शत्रुहरूले येशूलाई सामरी भनी सम्बोधन गरेका थिए—यूहन्ना ८:४८ पढ्नुहोस्। सामरीहरू एक मिश्रित जाति थिए। तिनीहरू आधा-यहूदीहरू र आधा-अन्यजातिहरू थिए। कसरी यस्तो प्रकारको मिश्रित जाति हुन आयो त? सारांशमा सामरीहरूको इतिहास यस प्रकारको थियो:
इस्राएलका राजाहरूको पालामा सामरीया शहर उत्तरी राज्यको राजधानी थियो। उत्तरी राज्यमा इस्राएलका दस कुलहरू समावेश थिए र यसलाई "इस्राएल" भनिन्थ्यो भने बाँकी दुई कुलहरू भएको दक्षिणी राज्यलाई "यहूदा" भनिन्थ्यो र यसको राजधानी यरूशलेम थियो।
परमेश्वरले इ. पू. ७२२ मा उत्तरी राज्यमाथि इन्साफको रूपमा सामरीया शहरलाई कब्जा गर्न र त्यसका बासिन्दाहरूलाई कैद गरी लैजान अश्शूरी सेनालाई प्रयोग गर्नुभयो (२ राजा १७:५-६)। परमेश्वरले किन उनीहरूमाथि यस्तो भयानक इन्साफ आउन दिनुभयो? (२ राजा १७:७-८ पढ्नुहोस्) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________।
“मैले गरिब नेग्रो (हब्सी) हरूलाई बिर्सनुहुँदैन। अहँ, पटक्कै हुँदैन। येशू ख्रीष्ट उनीहरूको निम्ति मर्नु भएको हो, साथै अरूहरूको निम्ति पनि..... येशू ख्रीष्टमा महिला वा पुरुष, दास (कमारा) वा स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन; तपाईं पनि, यदी तपाईंले येशूमा विश्वास गर्नुभयो भने, परमेश्वरको सन्तान बन्न सक्नुहुन्छ। यदी तपाईंले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ।”